Ukwenziwa komatshini wokuDibanisa izaphulelo kunye neFektri | Xiong Ewe
Umatshini we-EPS Foam wokutyabeka ubaluleke kakhulu kumatshini njengocingo olushushu lwe-CNC umatshini wokusika amagwebu, weenkampani, ezivelisa imilo yokuhombisa yokwakha amagwebu. Umphezulu weemodeli zokuhombisa, ezisikwe ngeebhloko ze-EPS, kufuneka zigqitywe ngomatshini wokugquma amagwebu, ukukhusela indawo yokwakha kwiimeko zemozulu ezonakalisayo (njengemvula, ikhephu, isichotho, isaqhwithi kunye nobushushu umahluko phakathi kwemini nobusuku)
Umzekelo, awunakufumana imveliso yokuqala esemgangathweni ukuba umatshini wakho wokugquma amagwebu okanye udaka lwakho alulunganga nokuba usebenzisa olona hlobo lubalaseleyo lokusika amagwebu ehlabathi.
Ke ngoko, bonke oomatshini kwimveliso yakho babalulekile ngokulinganayo. Kubaluleke kakhulu ekuphumeleleni kwenkampani yakho ukuba uthenge oomatshini abahambelanayo nabanokudityaniswa.
Iivenkile zangaphandle zihombisa ukhetho olufanelekileyo.
Ukudibana kwe-EPS Foam Bussiness
Ukuba ufuna ukwenza ishishini elinokhuphiswano kwaye liya kuba nepesenti enkulu ekhulayo kwimakethi yoshishino lokwakha, kuya kufuneka uvelise iimveliso zokugqibela ezinomgangatho owamkelekileyo.
Njengoko kusaziwa, imveliso kufuneka ibonakale ikulungele ukuhlala kwindawo elungileyo kwintengiso ekujoliswe kuyo. Ke eyona nto ibaluleke kakhulu bubuso bemodeli yakho yokuhombisa ye-foam kufuneka igudile kwaye icace gca. Iikona zayo kufuneka zicace gca kwaye zithi nkqo. Kwaye okokugqibela akubangakho bubble ibonakalayo kumphezulu weemveliso. Kuya kufuneka ukhathalele loo miqathango ukonyusa ukusebenza komatshini wakho wokutyabeka amagwebu.
Ukutyeba amagwebu Ukutyeba
Ngoku, unolwazi ngokubanzi malunga nokutyabeka amagwebu ke masikuxelele ngenqanaba eliphezulu lolwazi lobuchwephesha.
Ukuba zingaphi iimilimitha zodaka ezigqunywe kwigwebu kubaluleke kakhulu njengomgangatho wodaka kwigwebu ngelixa uvelisa iiprofayili zangaphandle zokuhombisa kunye nezinye iimveliso zangaphandle.
Unokwenza ukutyabeka kangangoko ufuna phakathi kwe-1 millimeter kunye ne-10 millimeters usebenzisa umatshini wethu wokutyabeka amagwebu. (Olona daka luxhaphakileyo lweemveliso zangaphandle ezikhethwayo kumgangatho olungileyo kunye nemveliso yezoqoqosho kwihlabathi liphela zi-2 mm / 3 mm kunye ne-4 mm.) Ayisiyo ndlela echanekileyo yokucinga ukuba "imveliso ebotshwe ubukhulu isoloko umgangatho olungileyo. ”
Umhla womatshini oqhelekileyo nceda uqhagamshele nathi, okanye ushiye umyalezo, uya kukuthumela kungekudala.
Egqithileyo Lyu umatshini amagwebu yokutshiza
Okulandelayo: Ulawulo lwamanani amagwebu oMatshini wokusika